Tsy andrasana valifaty amerikana amin'i Iran
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy andrasana valifaty amerikana amin'i Iran
Janoary 8, 2020
Hatreto aloha dia mbola mety tsara! Nilaza ny tompon'andraikitra miaramila amerikana fa ny fanafihana nataon'i Iran dia tany amin'ireo faritra teo amin'ny toby roa izay tsy onenan'ireo Amerikanina.
Nisioka ny filoha: Tsara daholo! Ny balafomanga dia natsangana avy any Iran tany amin'ny toby miaramila roa any Irak. Fanombanana ireo maty sy fahavoazana mitranga ankehitriny. Hatreto aloha dia mbola mety tsara! Manana ny tafika matanjaka sy matanjaka indrindra izahay na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, hatreto! Hanao fanambarana aho rahampitso maraina.
Ity dia mety vaovao tsara raha sendra misy ny toe-javatra tsy mitarika valinteny matotra kokoa. Nametraka ny tsipika mena ny filoha Trump raha vonoina ny Amerikanina. Ny tsy fananana Amerikanina maty dia mety hanafoana ny filana valiny fanampiny.
Nilaza i Iran fa "namarana" ny valiny tamin'ny famonoana ny jeneraliny, manondro fa manantena izy ireo fa tsy hamaly ny fanafihana farany teo i Etazonia. Nanao sonia i Iran fa te-hihena izao satria efa nanao valifaty izy io. Mino izahay fa hamaly miaramila i Etazonia.
Ny rafitra fampitandremana Defcon DWS dia fikambanana mpitsikilo izay mifantoka amin'ny fandrahonana amin'ny ady nokleary ary manome kaody fanairana ho an'ny besinimaro mifototra amin'ny zava-misy ankehitriny.
DEFCON dia nandefa: Arakaraka ny manginan'i Etazonia ny fanafihana Iraniana, dia vao mainka manomana valiny i Etazonia.
Ny haavon'ny Defcon dia mijanona amin'ny farany ambany indrindra, haavo 5 araka ny DWS. DWS nisioka. Ny sasany dia mitatitra fa ny Etazonia dia ao amin'ny DEFCON 2 na koa ny DEFCON 1. Ity dia tatitra tsy tompon'andraikitra.
Nilaza ny IRGC Iraniana nandrava maro izy ireo USArmy angidimby sy drôna ary maty 80 # US tafika any. Ity vaovao ity, raha marina dia mety tsy mandeha tsara amin'ny filoha Trump, izay mikasa ny hanao izany ampahafantaro ny vahoaka amerikana ny maraina.